Date My Pet » 8 Fanontaniana Date First Great Tokony Anontanio
Dia efa nisy tamin'ny voalohany rehetra daty. Na no nahatonga ny fifandraisana na nifarana taorian'ny daty vitsivitsy, fantatsika rehetra ny fanerena sy ny fanahiana izay dia tonga miaraka amin'ity fivoriana nitokanana voalohany. Raha ny tena izy, daty voalohany dia azo sokajiana ho anisan'ny zavatra tena manahiran-tsaina anao koa anefa ny toe-javatra eo amin'ny fiaraha-monina. Fa izaho kosa hamela anareo ao amin'ny miafina kely: ny ilaina mba hahasambatra ny daty voalohany dia tony, mampahazo aina resaka. Izany dia azo mora foana tanteraka amin'ny alalan'ny tsara daty voalohany voafidy fanontaniana.
Iza no hery mitarika lehibe indrindra eo amin'ny fiainanao?
Amin'ny alalan'ny fametrahana fanontaniana izany, dia ho bebe kokoa ny daty ny moraly sy ny soatoavina. Izany koa dia hampiseho aminao izay hampiala ny tari-dalana sy torohevitra.
Aiza no toerana tena toerana eto amin'izao tontolo izao? Nahoana?
Na dia ny tora-pasika, tendrombohitra, na any amin'ny eo, io fanontaniana io dia hanome antsika hahatakatra ny daty 'toetra.
Inona no toerana tena sarimihetsika amin'ny fotoana rehetra? Nahoana?
Tsy izany ihany no mampiseho ny daty 'ny zavatra tiany sy mahaliana fa izany koa pamantarana tsara mba hahitana raha mifanaraka.
Inona no tanjona lehibe indrindra eo amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao?
Io fanontaniana io dia tsy hilaza aminao ny fatra-paniry laza ny daty dia fa hanome hahatakatra ny tena dingana ny fiainana fa izy ireo amin'ny.
Inona no toerana tena fomba handaniana ny faran'ny herinandro?
Ny valin'io fanontaniana io dia maneho ny daty ny fomba fiainantsika, mahaliana, ary ny fialam-boly. Izany no fanontaniana tsara iray hafa mba hahita raha toa ka mifanaraka.
Nanao ahoana ny fianakavianao tahaka ny nihalehibe?
Fahazoana ny sombin'ny fomba nipoitra ny daty dia haneho aminareo ny fomba hanangana (na amin'ny tranga sasany, tsy hanangana) ny ho avy ny ankizy. Valiny izany koa ny manoro ny tena ny daty efa voaresaka ny eo amin'ny fiainana, mampiseho kokoa ny toetra amam-panahy.
Inona no hitanao manintona?
Ankoatra ny fananana simia sy ny fifanintonana ara-batana, hihaino tsara izay toetra mamaritra ny daty. Ny valin'io fanontaniana io no milaza ny inona marina tiany ao amin'ny mpiara-miasa. Ary matetika kokoa noho ny tsy, ireo toetra ireo izy ireo lisitra ireo fa manana ny tenany.
Inona no indray andro izay dia ho tia ny Velombelomy hatrany?
Io fanontaniana io dia tena filàzany rehefa tsy mahazo topimaso ao amin'ny fiainan'ny daty fa mahazo ny Velombelomy hatrany izany aminy ho an'ireo minitra fohy rehefa milaza izany anao.
Mazava ho azy fa ireo fanontaniana ireo dia dingana voalohany fotsiny. Raha mbola mihaino tsara, Tsy mazoto loatra na manokana, ary dia tena, Azo antoka fa ianao manana mahafinaritra daty voalohany.